Huawei dia mandefa ny fanasana amin'ny fampisehoana ny Mate 10 amin'ny 16 Oktobra | Androidsis
Huawei, mpanamboatra finday avo lenta lehibe indrindra any Shina ary iray amin'ireo manandanja indrindra manerantany, dia hamoaka amin'ny fomba ofisialy izay ho flagship vaovao. Ny orinasa dia efa nandefa ny fanasan'ny media ho an'ny a hetsika manokana izay hatao ny ampitso 16 ho an'ny Oktobra ary amin'izany no hanolorany ny vaovao Huawei Mate 10.
Ity fanasana ity dia tsy mamoaka antsipiriany misimisy kokoa, isa 10 be dia be fotsiny ao ambadiky ny famakiana ny teny hoe "Mihaona ny fitaovana mendrika ny fiandrasana" Amin'ity teny filamatra ity, ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny hetsika, amin'ny 16 Oktobra 2017 ao amin'ny tanànan'ny Munich any Munich.
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanatri-maso onjan'ny tsaho, fivoahana ary teasers izay nampiharihary taminay ny fanoroana ny momba ny Huawei Mate 10 manaraka, ny sasany avy amin'ny tale jeneralin'ilay orinasa. Araka izany, efa fantatsika fa ho avy miaraka amin'ny a famolavolana efijery feno tsy misy rafitra ho iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe izay tsy maintsy ampiantsika a fotoana bateria ambony kokoa (4.000 mAh) raha oharina amin'ny teo alohany, ny Huawei Mate 9, ary ny haavon'ny haavo sy ny hafainganana avo indrindra, hany ka nanamafy ny Tale jeneralin'ny orinasa fa "vokatra mahery vaika kokoa" noho ny Apple iPhone manaraka izy.
Hafa ny toetra mampiavaka ny phablet vaovao fiaviana sinoa dia izy Fampisehoana Quad HD 6,1 izay ahafahanay mijery amin'ny antsipiriany ireo horonan-tsary sy sary nalaina niaraka tamin'ny anao fakan-tsary indroa mifangaro amin'ny solomaso novokarin'i LEICA, rafitra iray an'ny fampiorenana sary optika (OIS) ary flash LED roa.
Hanana mpampifandray ihany koa izy io USB Type-C, mpandahateny roa, mpanodina Kirin 970 namboarin'ny tenany, 6 GB an'ny RAM y Fitahirizana 64 GB ary hitantana ny Android 7.1.1 Nougat ho toy ny rafitra miasa.
Ny Huawei Mate 10 dia iray amin'ireo telefaona andrasana indrindra taorian'ny andiany teo aloha gaga tamin'ny fiainana bateria lehibe sy ny rafitry ny fakantsary roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia mandefa ny fanasana amin'ny fampisehoana ny Mate 10 amin'ny 16 Oktobra
Ny efitrano fiasan'ny Google dia nohavaozina miaraka amin'ny fitaovana fanovana vaovao